Labada dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan oo heshiinaya
By GO + Wakaaladaha
Tani ayaa meesha ka saareysa cabsida laga qabay dagaal ganacsi oo dhexmara dowladahaan.
WASHINGTON, US - Labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee kala ah Mareykanka iyo Shiinaha, ayaa lagu wadaa in ay maanta oo Arbaca ah kala saxiixdaan heshiis ganacsi.
Wallow ay jirto boqollaal bilyan oo dollar oo canshuur kordhin ah oo labada dhinac isugu jawaabeen, haddana heshiiska maanta qeyb kama noqon doonto khafiifinta tacriifta labada dhinac ay dul-dhigeen badeecadaha ay isu dhoofiyaan.
Wajiga koowaad ee heshiiska labada waddan ayaa waxaa ugu weyn in Shiinaha uu muddo kooban iibsado miraha iyo wax soo saarka ka yimaada Mareykanka.
Faah-faahinta kale ee heshiiska ayaa soo bixi doonta marka ay saraakiisha labada dhinac maanta ku saxiixaan Aqalka Cad ee magaaladan Washington.
Donald Trump iyo dhigiisa Shiinaha ayaa dhowr jeer wada-hadalo dhanka telefoonka ah yeeshay kahor inta aysan xaaladu heerkan soo gaarin.
Inkastoo aanan la hubin hadii ay dhaqan-gelin doonan is-afgaradkan, tani ayaa ugu yaraan waxay meesha ka saareysaa cabsida laga qabay dagaal dhanka ganacsiga ah oo dhexmara dowladahaan.